ည Juty ဆရာဝန်က ဆေးစာအုပ်ကိုမကြည့်ဘဲ သွေးတိုးပြီး တက်နေတာကို ရိုးရိုးတက်နေတာထင်လို့ တဲ့ ...အိပ်ဆေးထိုးလိုက်တာ သတိလည်မလာတော့ပဲ အသက်ပါပေးလိုက်ရ - MM Live News
ေမတၱာမြန္ေဆး႐ုံက ဆရာဝန္ေရ နင္ရဲ႕ေပါ့ဆမူ႕ေတြေၾကာင့္ ငါ့အေမကမေသသင့္ဘဲ ေသခဲ့ရတာပါ ….ေန႕ Juty ဆရာဝန္မက မနက္ျဖန္ေဆး႐ုံကဆင္းရမယ္ေနာ္လို႔ေျပာထားၿပီးသားကို ည Juty ဆရာဝန္က ေဆးစာအုပ္ကိုမၾကည့္ဘဲ ေမေမေသြးတိုးၿပီး တက္ေနတာကို ရိုးရိုးတက္ေနတာထင္လို႔တဲ့ …..အိပ္ေဆးထိုးလိုက္တယ္…..
ၿပီးေတာ့ အိပ္ေဆးထိုးၿပီးၿပီးခ်င္း ေမေမကလုံးဝကို သတိလည္မလာေတာ့ဘူး…..အဲတာကို အိပ္ေနတာတင္လို႔တဲ့ …..တဂယ္ဆို အိပ္ေဆးကထိုးၿပီးၿပီးခ်င္း ခ်က္ခ်င္းအိပ္ေပ်ာ္လို႔လား ….အဲတာေလးေတာင္ ဆရာဝန္တစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီး မသိဘူးလား ….ေဆးထိုးၿပီးေတာ့လဲ လူနာကိုဘာမွျပန္မစစ္ေဆးဘ ဲဒီတိုင္းဘဲလွည့္ထြက္သြားတယ္ ….
တဂယ္ဆို လူနာတစ္ေယာက္ကို ေဆးမထိုးခင္မွာ ဘာျဖစ္လဲဆိုတာကို အရင္စစ္ေဆးရတယ ္မဟုပ္ဘူးလား….ေဆးထိုးၿပီးသြားရင္ေရာ လူနာအေျခေနကို ခနေစာင့္ၾကည့္ေပးရတယ္မဟုပ္ဘူးလား …..ဒါေလးေတာင္ ဆရာဝန္တစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီးေတာ့ မသိဘူးလား ေျပာေတာ့ ပါရဂူေတြဆို သူတို႔သာ အဲအခ်ိန္မွာ ခ်က္ခ်င္းစစ္ေဆးခဲ့မယ္ဆို အခ်ိန္မွီေသးတယ္ေဆးထိုးၿပီး 45 မိနစ္ေလာက္ေနမွ လာစစ္ေဆးတယ္ ….
အဲခ်ိန္မွာ ေမေမက ႏွလုံးသိပ္မခုံေတာ့ဘူး …..အဲေတာ့မွျပာယာခပ္ၿပီ အခန္းထဲကေန လူနာေစာင့္အားလုံးကို အျပင္ထြက္ခိုင္းၿပီး အထဲမွာဘာေတြလုပ္ေနလဲေတာ့မသိဘူး …..တေအာင့္ေနေတာ့မွ တရာဝန္မတစ္ေယာက္ေျပးထြက္လာၿပီး အဲဒီေတာ့မွ ေဆးခန္းစအုပ္ကို လာယူသြားတယ္ …..လူနာအေျခေနမေကာင္းေတာ့ဘူးဆိုေတာ့မွ ေဆးခန္းစာအုပ္ကို ဖြင့္ၾကည့္တယ္…..
အဲတာလားဆရာဝန္ဆိုတာ ခနေနေတာ့ ဆရာဝန္ထြက္လာၿပီး လာေျပာတယ္ ….ကြၽန္ေတာ္က ရိုးရိုးတက္တယ္ထင္ၿပီး အိပ္ေဆးထိုးလိုက္တာတဲ့ …..ေသြးေဆာင့္တက္ၿပီး ဦးေခါင္းထိသြားတယ္ထင္တယ္တဲ့ …..အဲလိုေျပာၿပီးျပန္ဝင္သြားတယ္…..10 မိနစ္ေလာက္ေနေတာ့ျပန္ထြက္လာတယ္ ….ဆုံးၿပီတဲ့ ဦးေႏွာက္ေသြးေၾကာေပါက္လို႔တဲ့ …..
ဆရာဝန္တစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီး ေျပာတဲ့စကားကိုက ရိုးရိုးတက္တယ္ထင္လို႔၊အိပ္ေပ်ာ္ေနတယ္ထင္လို႔ လူနာတစ္ေယာက္ကို ဘာမွမစစ္ေဆးဘဲ သူထင္တာတစ္ခုထဲနဲ႕ဘဲေဆးကိုထိုးတယ္….. ၿပီးေတာ့ သူထင္တာတစ္ခုထဲနဲ႕ဘဲ လူနာကိုအိပ္ေနတယ္ထင္လို႔တဲ့ ….ဘာမွမစစ္ေဆးဘဲ ဒီတိုင္းဘဲပစ္ထားတယ္ …..အဲတာလားဆရာဝန္ ပိုက္ဆံက်ေတာ့ ႏွစ္ရက္နဲ႕ တစ္ညကို 2သိန္းေက်ာ္ေတာင္ေတာင္းတယ္….
လူနာက်ေတာ့ ဂ႐ုမစိုက္ဘူး ….နင္တို႔ေဆး႐ုံက ပိုက္ဆံကိုဘဲၾကည့္တက္တာလား ….လူနာက်ေတာ့ ေသခ်ာမၾကည့္တက္ဘူးလား ….အခုေတာ့ ငါ့အေမက ေဆး႐ုံကဆင္းခါနီးက်မွ နင္တို႔ရဲ႕ေပါ့ဆမူ႕ေတြေၾကာင့္ မေသသင့္ဘဲေသခဲ့ရတာပါ …..အဲကိစၥကို ေဆး႐ုံအုပ္နဲ႕သြားရွင္းေတာ့ သူတို႔က မတက္ေအာင္လို႔က်တဲ့ေဆးထိုးတာပါတဲ့ ….
ဟိုစရာဝန္ကေျပာေတာ့ အိပ္ေဆးထိုးတာဆိုလို႔ျပန္ေမးေတာ့ အဲဒီေတာ့မွ မ်က္ႏွာပ်က္သြားၿပီး အိပ္ေဆးနဲ႕ က်တဲ့ေဆးက အတူတူဘဲတဲ့ ….ေဆး႐ုံအုပ္ျဖစ္ၿပီး စကားကိုအမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာတယ္ …ကိုနားမလည္တဲ့ ေဆးေလာကအေၾကာင္းေတြနဲ႕ စကားကိုအမ်ိဳးမ်ိဳးလွည့္ေျပာတယ္….
ေအးေပါ့ေလ ေဆးအေၾကာင္းမွ ငါတို႔ကနားမွမလည္တာ နင္ေျပာတဲ့ အိပ္ေဆးနဲ႕ ေသြးတိုးရင္က်တဲ့ေဆးက အတူတူဘဲလို႔ေျပာတဲ့စကားကိုေတာ့ မွက္ထာလိုက္ပါမယ္ ….တဂယ္ဆို အိပ္ေဆးနဲ႕ ေသြးတိုးရင္ က်ေအာင္ထိုးထဲ့ေဆးက သက္သက္ဘဲဆိုတာ ဆရာဝန္အုပ္ႀကီးျဖစ္ၿပီးမသိတာလား….
ငါကဘဲ နားမလည္တာလားေတာ့မသိဘူး …..ေအးေပါ့ေလ ငါဘဲမသိတာျဖစ္မွာပါ …..ေဆး႐ုံအုပ္ႀကီးေျပာတဲ့ ေသြးတိုးရင္က်တဲ့ ေဆးကခ်က္ခ်င္းထိုး ခ်က္ခ်င္းအိပ္ေပ်ာ္တယ္ေပါ့ေလ ….တဂယ္ကိုနားမလည္ေတာ့ဘူး …..စစ္သားေတြနဲ႕လိုက္ေျပာမွ သူတို႔ဘက္ကေပါ့ေခ်ာ့သြားပါတယ္တဲ့ ေတာင္ပန္ပါတယ္တဲ့ …..
နင္တို႔ဘက္က ေတာင္းပန္ပါတယ္ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ႕ေတာင္းပန္လိုက္ေပမယ့္ ငါ့ဘက္ကေတာ့ အေမတစ္ေယာက္လုံးဆုံး႐ူံးလိုက္ရတာပါ….ဘယ္အရာနဲ႕မွအစားထိုးလို႔မရတဲ့အေမပါ နင္တို႔ကိုငါဘယ္ေတာ့မွခြင့္မလႊတ္ဘူး ….
ေနာက္လူေတြလဲ ငါလိုအျဖစ္မ်ိဳးမႀကဳံရေအာင္ ေတၱာမြန္ေဆး႐ုံကိုေဝးေဝးေရွာင္နိုင္ၾကပါေစ။26.4.2019 ေမေမ့ရက္လည္ပါ ေမေမေကာင္းရာမြန္ရာေရာက္ပါေစ။အနီေရာင္ႏွင္းဆီ
မေတ္တာမွန်ဆေးရုံက ဆရာဝန်ရေ နင်ရဲ့ပေါ့ဆမူ့တွေကြောင့် ငါ့အမေကမသေသင့်ဘဲ သေခဲ့ရတာပါ ….နေ့ Juty ဆရာဝန်မက မနက်ဖြန်ဆေးရုံကဆင်းရမယ်နော်လို့ပြောထားပြီးသားကို ည Juty ဆရာဝန်က ဆေးစာအုပ်ကိုမကြည့်ဘဲ မေမေသွေးတိုးပြီး တက်နေတာကို ရိုးရိုးတက်နေတာထင်လို့တဲ့ …..အိပ်ဆေးထိုးလိုက်တယ်…..
ပြီးတော့ အိပ်ဆေးထိုးပြီးပြီးချင်း မေမေကလုံးဝကို သတိလည်မလာတော့ဘူး…..အဲတာကို အိပ်နေတာတင်လို့တဲ့ …..တဂယ်ဆို အိပ်ဆေးကထိုးပြီးပြီးချင်း ချက်ချင်းအိပ်ပျော်လို့လား ….အဲတာလေးတောင် ဆရာဝန်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး မသိဘူးလား ….ဆေးထိုးပြီးတော့လဲ လူနာကိုဘာမှပြန်မစစ်ဆေးဘ ဲဒီတိုင်းဘဲလှည့်ထွက်သွားတယ် ….
တဂယ်ဆို လူနာတစ်ယောက်ကို ဆေးမထိုးခင်မှာ ဘာဖြစ်လဲဆိုတာကို အရင်စစ်ဆေးရတယ ်မဟုပ်ဘူးလား….ဆေးထိုးပြီးသွားရင်ရော လူနာအခြေနေကို ခနစောင့်ကြည့်ပေးရတယ်မဟုပ်ဘူးလား …..ဒါလေးတောင် ဆရာဝန်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ မသိဘူးလား ပြောတော့ ပါရဂူတွေဆို သူတို့သာ အဲအချိန်မှာ ချက်ချင်းစစ်ဆေးခဲ့မယ်ဆို အချိန်မှီသေးတယ်ဆေးထိုးပြီး 45 မိနစ်လောက်နေမှ လာစစ်ဆေးတယ် ….
အဲချိန်မှာ မေမေက နှလုံးသိပ်မခုံတော့ဘူး …..အဲတော့မှပြာယာခပ်ပြီ အခန်းထဲကနေ လူနာစောင့်အားလုံးကို အပြင်ထွက်ခိုင်းပြီး အထဲမှာဘာတွေလုပ်နေလဲတော့မသိဘူး …..တအောင့်နေတော့မှ တရာဝန်မတစ်ယောက်ပြေးထွက်လာပြီး အဲဒီတော့မှ ဆေးခန်းစအုပ်ကို လာယူသွားတယ် …..လူနာအခြေနေမကောင်းတော့ဘူးဆိုတော့မှ ဆေးခန်းစာအုပ်ကို ဖွင့်ကြည့်တယ်…..
အဲတာလားဆရာဝန်ဆိုတာ ခနနေတော့ ဆရာဝန်ထွက်လာပြီး လာပြောတယ် ….ကျွန်တော်က ရိုးရိုးတက်တယ်ထင်ပြီး အိပ်ဆေးထိုးလိုက်တာတဲ့ …..သွေးဆောင့်တက်ပြီး ဦးခေါင်းထိသွားတယ်ထင်တယ်တဲ့ …..အဲလိုပြောပြီးပြန်ဝင်သွားတယ်…..10 မိနစ်လောက်နေတော့ပြန်ထွက်လာတယ် ….ဆုံးပြီတဲ့ ဦးနှောက်သွေးကြောပေါက်လို့တဲ့ …..
ဆရာဝန်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ပြောတဲ့စကားကိုက ရိုးရိုးတက်တယ်ထင်လို့၊အိပ်ပျော်နေတယ်ထင်လို့ လူနာတစ်ယောက်ကို ဘာမှမစစ်ဆေးဘဲ သူထင်တာတစ်ခုထဲနဲ့ဘဲဆေးကိုထိုးတယ်….. ပြီးတော့ သူထင်တာတစ်ခုထဲနဲ့ဘဲ လူနာကိုအိပ်နေတယ်ထင်လို့တဲ့ ….ဘာမှမစစ်ဆေးဘဲ ဒီတိုင်းဘဲပစ်ထားတယ် …..အဲတာလားဆရာဝန် ပိုက်ဆံကျတော့ နှစ်ရက်နဲ့ တစ်ညကို 2သိန်းကျော်တောင်တောင်းတယ်….
လူနာကျတော့ ဂရုမစိုက်ဘူး ….နင်တို့ဆေးရုံက ပိုက်ဆံကိုဘဲကြည့်တက်တာလား ….လူနာကျတော့ သေချာမကြည့်တက်ဘူးလား ….အခုတော့ ငါ့အမေက ဆေးရုံကဆင်းခါနီးကျမှ နင်တို့ရဲ့ပေါ့ဆမူ့တွေကြောင့် မသေသင့်ဘဲသေခဲ့ရတာပါ …..အဲကိစ္စကို ဆေးရုံအုပ်နဲ့သွားရှင်းတော့ သူတို့က မတက်အောင်လို့ကျတဲ့ဆေးထိုးတာပါတဲ့ ….
ဟိုစရာဝန်ကပြောတော့ အိပ်ဆေးထိုးတာဆိုလို့ပြန်မေးတော့ အဲဒီတော့မှ မျက်နှာပျက်သွားပြီး အိပ်ဆေးနဲ့ ကျတဲ့ဆေးက အတူတူဘဲတဲ့ ….ဆေးရုံအုပ်ဖြစ်ပြီး စကားကိုအမျိုးမျိုးပြောတယ် …ကိုနားမလည်တဲ့ ဆေးလောကအကြောင်းတွေနဲ့ စကားကိုအမျိုးမျိုးလှည့်ပြောတယ်….
အေးပေါ့လေ ဆေးအကြောင်းမှ ငါတို့ကနားမှမလည်တာ နင်ပြောတဲ့ အိပ်ဆေးနဲ့ သွေးတိုးရင်ကျတဲ့ဆေးက အတူတူဘဲလို့ပြောတဲ့စကားကိုတော့ မှက်ထာလိုက်ပါမယ် ….တဂယ်ဆို အိပ်ဆေးနဲ့ သွေးတိုးရင် ကျအောင်ထိုးထဲ့ဆေးက သက်သက်ဘဲဆိုတာ ဆရာဝန်အုပ်ကြီးဖြစ်ပြီးမသိတာလား….
ငါကဘဲ နားမလည်တာလားတော့မသိဘူး …..အေးပေါ့လေ ငါဘဲမသိတာဖြစ်မှာပါ …..ဆေးရုံအုပ်ကြီးပြောတဲ့ သွေးတိုးရင်ကျတဲ့ ဆေးကချက်ချင်းထိုး ချက်ချင်းအိပ်ပျော်တယ်ပေါ့လေ ….တဂယ်ကိုနားမလည်တော့ဘူး …..စစ်သားတွေနဲ့လိုက်ပြောမှ သူတို့ဘက်ကပေါ့ချော့သွားပါတယ်တဲ့ တောင်ပန်ပါတယ်တဲ့ …..
နင်တို့ဘက်က တောင်းပန်ပါတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့တောင်းပန်လိုက်ပေမယ့် ငါ့ဘက်ကတော့ အမေတစ်ယောက်လုံးဆုံးရူံးလိုက်ရတာပါ….ဘယ်အရာနဲ့မှအစားထိုးလို့မရတဲ့အမေပါ နင်တို့ကိုငါဘယ်တော့မှခွင့်မလွှတ်ဘူး ….
နောက်လူတွေလဲ ငါလိုအဖြစ်မျိုးမကြုံရအောင် တ္တောမွန်ဆေးရုံကိုဝေးဝေးရှောင်နိုင်ကြပါစေ။26.4.2019 မေမေ့ရက်လည်ပါ မေမေကောင်းရာမွန်ရာရောက်ပါစေ။အနီရောင်နှင်းဆီ
ထိုင်း မှာ ကွယ်လွန်သွားပြီး မကျွတ်မလွတ် ဘဝ နဲ့ ထူးခြားမှုတွေ ပြခဲ့တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသား ကိုဇော်မျိုးဝင်း
ကျမတို့က မရှိဆင်းရဲသားတွေဖြစ်လို့ ကျွန်မသမီးလေးကို ကယ်တင်ဖို့ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးကြပါ
မိုးလေဝသပညာရှင် ဒေါက်တာဦးထွန်းလွင် ဆေးရုံတက်ရောက်ကာ ကုသမှုခံယူနေရ
ပန်းအပြင်အဆင် ကျပ်သိန်း ၅၀၀၀ ခန့် ကုန်ကျခံပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့ ပြင်ဦးလွင် ကန်တော်ကြီးထဲက မင်္ဂလာပွဲ …
January 20, 2020 MM Live